शक्तिसंघर्षले नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा सर्ने संकेत « हाम्रो ईकोनोमी
प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु ७० को हाराहारी र त्योभन्दा माथि छन् । विगत एक दशकयता राजनीति यी नेताहरुको वरपर घुमिरहेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि नयाँ पुस्ता नेपालको राजनीतिमा शक्तिशाली बन्यो । सुशील कोइराला केही समय शक्तिमा रहे । तर, उनको निधनपछि काँग्रेसमा शेरबहादुर देउवा हावी भए । अहिले देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, डा.बाबुराम भट्टराई मुख्य शक्ति हुन् । यीनै नेताहरुबीच देशमा मुख्य शक्तिसंघर्ष चलिरहेको छ ।
७० को हाराहारीमा पुगेका र नाघेका यी नेताहरुबाट दोस्रो पुस्तामा सत्ता हस्तान्तरणको पहल भइरहेको छ । दोस्रो पुस्ताले पुरानो पुस्ताबाट सजिलै सत्ता आउला भन्ने देखिरहेको छ । उनीहरु संघर्ष गर्न साहस गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले पुरानो पुस्ताकै वरपर शक्ति घुमिरहेको छ । नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबीच मुख्य संघर्ष चलिरहेको छ । झलनाथ खनाल र बामदेव गौतम पनि यसमा सहभागी छन् । उनीहरुपछिको पुस्ताका भीम रावल र ईश्वर पोखरेल फरक खेमामा छन् । उनीहरु दुवै नेतृत्वमा पुगिहाल्ने तर्फ बढेको देखिदैनन् ।
नेपाली काँग्रेसमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच नै संघर्ष केन्द्रित छ । त्यसपछिका पुस्ताका प्रकाशमान सिंह, डा. सशांक कोइरारा, डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वमा पुग्न संघर्षरत छन् । तर, उनीहरु एक्लै अगाडि बढ्ने अवस्थामा देखिएका छैनन् । यो पुस्तामा तत्काल नेतृत्व आइपुग्ने देखिएको छैन । सिटौला ७० कटिसकेका छन् । अन्य नेताहरु ७० को आसपास पुगिसकेका छन् । देउवा र पौडेल ७० कटिसकेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एकछत्र प्रभाव छ । ७० नजिक पुगेका प्रचण्डबाट अहिले नै नेतृत्व हस्तान्तरण हुने देखिदैन । माओवादीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरा पनि प्रचण्डकै पुस्ताका हुन् । त्यसपछिका पुस्ताका जर्नादन शर्मा प्रभाकर, वर्षमान पुन, मातृका यादवहरु नेतृत्वका दाबेदार देखिन्छन् । तर, उनीहरुमा यति चाँडै नेतृत्व पुग्ने सम्भावना कमजोर छ । मधेश केन्द्रित दलहरु लामो समय एक हुन सकेका छैनन् । मधेश केन्द्रित दलहरुमा महन्थ ठाकुर पुराना पुस्ताका हुन् । उपेन्द्र यादव विगत एक दशकयता मधेश केन्द्रित दलको नेतृत्वमा छन् । यी नेताहरुबाट नेतृत्व हस्तान्तरण भइहाल्ने देखिदैन । बरु मधेश केन्द्रित दलमा नेता धेरै छन् ।